Ny Maley na Malay dia ireo vahoaka aostrôneziana ao amin' ny morontsiraka atsinanana amin' ny nosy indônezianan' i Somatra, ny nosy Riau, izay indôneziana koa, ao amin' ny alanan' ny nosy Bôrneô, ao amin' ny saikanosin' i Malezia, nhy saikanosin' i Singaporo ary ny tapany atsimon' i Tailandy (faritanin' i Yala, Pattani, Narathiwat ary Songkhla) izay mampiasa fiteny aoamin' ny vondrom-piteny atao hoe "maley". Na dia izany aza dia ny fitenenana ny fiteny iray ao amin' ity vondrona ity dia tsy ampy haha Maley ny olona iray. Mazava izany raha ny momba ny mpiteny sokajina hoe Trade Malay (fiteny maley ampiasaina amin' ny raharaham-barotra). Ny vahoaka mpiofanolo-bodirindrina amin' ny Maley - toy ny Minangkabao amin' ny tapany andrefan' i Somatra na ny Mosy (Musi) aop amin'ny faritr' i Palembang amin' ny tapany atssimon' i Somatra - dia tsy manao ny tenany ho Maley (izay voambolana manondro nhy maha izy ny vahoaka iray).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Maley_(vahoaka)&oldid=1038515"
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2021 amin'ny 13:20 ity pejy ity.